काठमाण्डौं ३१ भदौ । स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका डा. रोशन पोखरेलले पदबहाली गरेका छन्। लामो समयसम्म कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरमा रहेका डा. पोखरेल अस्पतालमा पूर्व मेडिकल सुपरिटेण्डेट समेत हुन् । उनी टेकुस्थित विभागमा मंगलबार पदबहाली भएका हुन् ।
मन्त्रालयले डा. पोखरेललाई कामु महानिर्देशकको जिम्मवारी दिएको छ। डा. पोखरेल ११ औं तहका कर्मचारी हुन्। विभागको महानिर्देशकमा १२औं तहको दरबन्दी भएपनि मन्त्रालयमा १२औं तहका कर्मचारी नै छैनन्।
कर्मचारी समायोजन पछिको पदस्थापनका क्रममा कोशी अस्पतालमा डा. गुणराज लोहनीलाई निर्देशकका रुपमा पठाएपछि डा. पोखरेल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएका थिए। डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले उमेरका आधारमा अवकाश पाएपछि महानिर्देशकको पद खाली थियो।